Oromia: Magaalaa Calanqootti Balaa Konkolaataatiin Namni 40 Du’ee Jira. | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ February 3, 2021 June 16, 2021
Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa naannawa magaalaa Calanqotti Maqaa hiriira deeggarsaatiin barattootaa fi namoota nagayaa humnaan konkolaataatti fe’anii gara iddoo hiriiraatti imalchiisaa osoo jiran konkolaataan garagalee lubbuun namoota 40 Olii dabruun himame.
Maddeen keenya baha Oromiyaarraa odeessa kana nuuf qoodan akka himanitti magaala calanqoo keessaatti hiriira deeggarsa hoggansa Abiyyii fi Balaaleffannaa Juntaarratti hirmaachuu qabdu jechuun barattoota magaalaa Qullubbii irraa fe’anii gara Calanqootti imalchiisaa osoo jiran balaa tiraafikaa mudateen Lubbuun namoota 40 olii dabruun addeeffameera.
Balaan Tiraafikaa kunis kan mudate naannawa magaalaa Calanqoo iddoo Duuse jedhamutti akka ta’e maddeen eeraniiru.
Akka maddi keenya Hospitaala Hiwoot-Faanaatti argamu amma nuuf himetti namoonni lubbuun dabran irra jireessan barattoota yoo ta’an namoonni nagayaa kararraa humnaan maqaa hiriiratiin konkolaataatti fe’anis keessatti kan argaman tahuu hima.
Barattoonni dhuman kunneen irra hedduun battalumatti lubbuun isaanii yoo darbu muraasni ammoo erga wal’aansaaf Hospitaala Hiwoot Faanaa jedhamu seenanii booda akka tahes maddi keenya kun ibseera.
Barattoonni Balaa tiraafikaa mudateen miidhaa cimaan irra gahuun waytii ammaa hospitaala Hiwoot Faanaatti du’aafi jireenya gidduu jiranis jiraachuu maddi keenya kun OMNitti himeera.
Murnoonni Bilxiginnaa hiriira dirqii raawwachuuf dhaloota Ol adeemoo karatti qaxara cabsuun nama gaddisiisa kan jedhu maddi keenya kun duuti barattootaa har’a Calanqotti mudate baay’ee kan nama naasisuudhas jedheera.
Hiriirri maqaa Deeggarsaatiin Murnoonni Bilxiginnaa hawaasa dirqaa jiran magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gara mormiitti jijjiirameera. Baatuu, Awwadaay, Dirree Xayyaaraa fi Burraayyuu akka fakkeenyaatti kaafamaniiru.
Haala jiru duukaa buunee kan isiniin dhaqqabnu taha.